Ifomu Lomnikelo - Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie
Ngabe iminikelo eya ePrairie State Legal Services iyadonswa?
Yebo, iminikelo idonswa enteleni; IPrairie State Legal Services iyinhlangano esiza abantulayo ngaphansi kwe-Internal Revenue Code isigaba 501 (c) (3).
Ngingakwazi ukwenza umnikelo ukuxhasa ihhovisi lasekhaya lePSLS?
Uma kwenzeka, iPrairie State iqondisa iminikelo ehhovisi lezinsizakalo lendawo emphakathini lapho iminikelo ivela khona. Ungaqondisa isipho sakho ehhovisi elingaphandle komphakathi wakho ngokukhombisa ihhovisi olithandayo.
Yaziwa kanjani iminikelo?
Yonke iminikelo yamukelwa kwifayela le- Umbiko Wonyaka. Iminikelo eyenziwe nge Umkhankaso Wezinsizakalo Zezomthetho zivame ukubonwa emicimbini yoMkhankaso, kumajenali ezinhlangano zabameli kwesinye isikhathi nasemaphephandabeni endawo. Izipho zingenziwa ngokuhlonipha noma ngokukhumbula abangani, umndeni noma osebenza nabo. Izicelo zokuhlala ungaziwa nazo ziyahlonishwa.
Ngabe ngizothola isiqinisekiso somnikelo wami?
Umnikelo ngamunye wamukelwa encwadini ngemuva nje kokutholwa kwesipho. Njalo ngonyaka ngoJanuwari sithumela umnikeli ngamunye isifinyezo sazo zonke izipho ezenziwe umnikeli ngonyaka owedlule.
Ngemibuzo nganoma iyiphi yalezi zindlela zokupha, sicela uthinte:
UJennifer Luczkowiak, uMqondisi Wezentuthuko kwa (224) 321-5643
IPrairie State Legal Services yinhlangano engenzi nzuzo futhi izipho zidonswa ngaphansi kwentela ye-IRS isigaba 501 (c) (3). Zonke izipho zithola ukwaziswa okubhaliwe futhi abanikeli bayaziwa kithina Umbiko Wonyaka. Izicelo zokuhlala ungaziwa ziyahlonishwa.
IPrairie State Legal Services, Inc. ixhaswe, ngokwengxenye, yiLegal Services Corporation (LSC). Njengombandela woxhaso oluthola ku-LSC, lukhawulelwe ekubandakanyeni kwezinye izinto kuwo wonke umsebenzi walo osemthethweni - kufaka phakathi umsebenzi osekelwa eminye imithombo yezimali. IPrairie State Legal Services, Inc. angeke ikwazi ukusebenzisa noma yiziphi izimali nganoma yimuphi umsebenzi onqatshelwe yi-Legal Services Corporation Act, 42 USC 2996, et. seq., noma ngomthetho womphakathi 104-134, §504 (a). Umthetho Womphakathi 104-134 §504 (d) udinga ukuthi isaziso sale mikhawulo sinikezwe bonke abaxhasi bezinhlelo ezixhaswe yi-Legal Services Corporation. Sicela uxhumane neHhovisi lethu Lokuphatha ku (815) 965-2134 ukuthola eminye imininingwane maqondana nale mikhawulo.